Kedu ka backlinks dofollow ga - esi dị ka 2018?
Dika ihe eji acho onu ogugu na-agbanwe agbanwe algorithm ha ma nye mmelite ohuru ohuru, otutu ndi webmasters na-eche ma ha kwesiri itinye ego n'oru ulo oru dofollow backlinks, ma obu. N'ihe ngọngọ nke Google Penguin na Panda ikpeazụ, ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nwere ụfọdụ obi abụọ gbasara ike dofollow inbound njikọ na 2018. Ejiri isiokwu a iji wepụ echiche niile na-ezighị ezi gbasara ike backlinks ma kụziere gị otu esi ewuli mmachi azụ azụ na afọ a na-abata.
Backlinks na anya nke engines ọchụchọ
Ebe ọ bụ na mmalite nke search engines akụkọ ihe mere eme, backlinks abụ akụkụ dị mkpa nke ha algọridim. Nke mbụ, ha na-arụ ọrụ iji chọpụta ọdịnaya ọhụrụ ma gbakọọ ikike nke akwụkwọ. Otú ọ dị, na mbụ, Google nyochare naanị ọnụ ọgụgụ backlinks na-enweghị mmasị na àgwà nke isi mmalite ha si abịa. Enwekwu ihe ederede web iyi enwetawo, nke ka elu ikike ya ga-adị na nchọta nke engines ọchụchọ. Ugbu a, a na-eji backlinks mee ihe maka ịchọpụta ihe ọhụrụ ma ọ bụ emelitere ọdịnaya nakwa maka ịmalite ịmalite.
Iji gbochie mmemme spam niile na search engine iwu mebiri, Google edoziwo Ntuziaka nke Webmaster tinyere ọrụ kachasị mma njikọ ụlọ.Iwu ndị a agbanwebeghị oge karịrị oge. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụla ọrụ webmaster nke a chọrọ iji dozie ebe nrụọrụ weebụ kwesiri ka a taa ya ahụhụ na oke ahụhụ Google.
Site na ngbanwe nke njikarịcha search engine, ọtụtụ ụlọ ahịa na-achọ ụzọ dị iche iche nke inweta backlinks. Webmasters gbalịrị ịchọta mmeri dị mkpirikpi iji nweta ọkwa dị elu na Google SERP. N'ihi ya, weebụsaịtị ndị na-ekwesịghị inweta ọkwa dị elu nke TOP Google site na itinye aka na Google Webmaster Guidelines violations. Ọ malitere ịmalite ahia ahịa na ịzụ ahịa na ahịa dijitalụ. N'ihi ya, ụlọ ọrụ nyochaa njikwa search engine agbajila usoro ọrụ njikọ dị irè, dị ka akwụkwọ ozi ndị ọbịa, mbipụta akụkọ, ahịa ahịa, blog akụkọ, mgbasa ozi mgbasaozi, posts, wdg.
Ugbu a, Google ka na-achọ ka azụlinks bụrụ onye onye nwe ụlọ ahụ chọrọ ma ọ bụ na ị gaghị agafe PageRank.
N'afọ 2012, Google guzobere Penguin algorithm, dịka a ga-esi chefuo backlinks spammy na weebụsaịtị nke kere ha.N'otu afọ ahụ, Google kere ngwá ọrụ na-achọghị na Google Search Console iji mee ka ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ kpochapụ ihe ọjọọ ha na-adịghị mma na ibe ha.
Dịka ị nwere ike ịhụ na mbido, echiche nke Google bụ iji zere njikọ njikọ iji bulite ogo na engines ọchụchọ. Ọtụtụ webmasters na-enweghị ahụmahụ akọwapụtawo iwu a n'ụzọ na-ezighị ezi, na njikwa njikọ ndị sitere na iwu a dị ka "Google na-emegide ụlọ njikọ maọbụ jikọta ụlọ anaghị aba uru ọzọ maka ego". Iji dozie ihe, Google anaghị emegide backlinks. N'ụzọ megidere nke ahụ, Google na-eji nsụgharị azụmazụ dịka nkatọ ogo maka ihe ọ bụla ọzọ 200. Otú ọ dị, Google na-arụsi ọrụ ike iji melite ahụmịhe ọchụchọ ndị ọkachamara. Ọ bụ ya mere Google ji na-agbaso mgbagwoju anya iji mee ka ị chọọ ọchụchọ naanị weebụsaịtị ndị bara uru na ọdịnaya ha Source .